सत्यमोहन जोशीको तस्वीर अंकित सिक्का निकालियो, एउटै सिक्का २५ सयको - Dna Nepal
सत्यमोहन जोशीको तस्वीर अंकित सिक्का निकालियो, एउटै सिक्का २५ सयको
वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको तस्वीर अंकित चाँदीको सिक्का निस्कासन गरिएको छ । जोशी सय वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंक, टक्सार विभागले जोशीको चित्र अंकित तीनवटा सिक्का निष्कासन गरेको हो ।
दुई हजार पाँच सय, एक हजार र एक सय रुपियाँ दरको सिक्कामा एकातिर जोशीको तस्वीर अंकित छ भने अर्को्तिर सगरमाथाको तस्वीर रहेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सिक्का सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विसं १९७७ वैशाख ३० गते कृष्ण नवमीका दिन ललितपुरको बखुम्बहालमा पिता शंकरदास र माता राजकुमारीका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा उनको जन्म भएको हो । राजा, राजपरिवारका सदस्यबाहेक जीवित हुँदा नै आफ्नो चित्र अंकित सिक्का निष्कासन गर्न पाउनुहुने वाङ्मय शताब्दी पुरुष जोशी पहिलो व्यक्ति हुन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री डा. खतिवडाले सत्यमोहन जिवित सम्पदा भएको बताए । उनले भने, ‘सय वर्ष पुगेपछि सम्पदाको रुपमा लिइन्छ, त्यसैले सत्यमोहन जिवित सम्पदा हुन् । जिवित इतिहास हुन् ।’
मन्त्री डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकको नोट तथा सिक्का निस्कासनमा संस्कृतिविद् जोशीले लामो समयसम्म योगदान पुर्याएको चर्चा गर्दै त्यसको सम्मान स्वरुप पनि सिक्का निस्कासन भएको बताए ।
पोखराबाट फ्रान्सले लग्यो बिमान चार्टड गरेर आफ्ना नागरिक	१३ चैत्र २०७६, बिहीबार १२:३१